Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 December, 2013, 11:21 GMT 14:21 SGA
Dakhaatiirta dalka Morocco waxaa dhaqaale weyn uu ka soo galaa qalliinka dumarka lagu qurxiyo.
9 Novermber 2011
Sacuudiga ayaa markii ugu horaysay xajka u adeegsaday helikobtaro lagu badbaadinaayo dadka xajinaaya
Telefoonka gacanta iyo Qaaradda Afrika Boqolkiiba 50 dadka ku nool qaarada Afrika ayaa isticmaala telefonka gacanta, Iyadoo Africa noqotay suuqa labaad dunida.
Waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah ardey sameysay baabuur ku shaqeeya koronto.
Warbixin ayaa ugu baaqday hayadaha gargaarka ee caalamka in ay dadka masaakiinta ah ay ka caawiyaan is badelka cimillada.
Raisal wasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa daaha ka rogay xarun deeq waxbarasho oo loogu faa'ideynayo ardeyda Bariga Afrika. 9 Novermber 2011
Dowlada Maraykanka ayaa si rasmi ah u dafirtay in ay wax ka ogtahay jiritaanka nolol dibadda ka ah dhulka.
8 Novermber 2011